Windows_Loader_v2.1.1 For Windows7~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Windows Loaders » Windows_Loader_v2.1.1 For Windows 7
By နေမင်းမောင်2:22 AM21 comments
ဇွဲသန့် March 11, 2012 at 6:22 AM
Download From Mediafire နှစ်ခုစလုံး click လို့ မရဘူး ခင်ဗျ......
htoominnaing March 11, 2012 at 9:31 AM
ဟုတ်တယ်ညီရေ နှစ်ခုလုံး မရဘူး ပြန်စစ်ပေးပါဦး
ကျော်ကျော်ဦး March 11, 2012 at 11:26 AM
bro u forget to putalink ~ :) pls check the link back~
နေမင်းမောင် March 11, 2012 at 1:53 PM
ဟုတ်ကဲ့ .. ကျွန်တော် မေ့ကျန်သွားခဲ့လို့ပါခင်ဗျာ .. ဒေါင်းလော့လင့်တွေ ပြန်ထည့်ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာ ..အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..
cnoon14@gmail.com March 11, 2012 at 8:03 PM
ရွေညာသား March 24, 2012 at 12:11 AM
Please cannot download, Thank you so much.
Anonymous April 30, 2012 at 10:26 PM
aryutin June 3, 2012 at 2:35 AM
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော့်ကောင် product key ပြန်ထည့်လို့ မရတာ အစ်ကိုတင်ထားတဲ့အပေါ်ကကောင် ဝင်ဒေါင်းလိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပြီ။ ကျေးဇူးများစွာတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က မလေးရှားမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ လမ်းကြုံခဲ့ရင် ဝင်လည်လို့ ရအောင် ဖုန်းနံပတ်ပေးခဲ့ပါမယ်.. အာယုတင် ၀၁၀ ၈၈၇၅၁၈၉ ပါခင်ဗျာ့။
soesoe June 22, 2012 at 6:15 AM
အစ်ကိုရေ run ပြီးတော့ install ဆိုတာမပေါ်ဘူးအစ်ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
minn ko July 28, 2012 at 3:23 PM
Kaung Chit Khine August 2, 2012 at 2:13 AM
Thank you so much. I know it is not enough that Thanks only word.
There is better than that word,I really want to say you. Bro.
Very useful. But Mediafire link was already deleted.
အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။xp အတွက်က အစ်ကို ပေးထားတဲ့လင့် က မရလို့ လိုက်ရှာပြီးဒေါင်းလိုက်တယ်။window7အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အစ်ကို တို့လို စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူတွေ တော်တဲ့လူတွေ ဗမာပြည်မှာ များများလိုတယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
myat aung January 12, 2013 at 9:16 AM
Invalid or Deleted File ဖြစ်နေတယ် ညီလေးရေ
ကူညီပါဦး ဖြစ်နိုင်ရင် အကို မေလ်ထဲကို ပို.ပေးပါ အကို မေးလ်က braveheart1550@gmail.com ပါ
နောက်ထပ် ပို့စ် တင်ဗျာ
Anonymous August 17, 2013 at 11:00 PM